ब्याजदर बजारको माग र पूर्तिले निर्धारण गर्ने हो, राष्ट्र बैंकले होइन : मेघ लामा तामाङ
हाम्राेखबर सोमबार, मङ्सिर ९ २०७६
वि.स.२०५६ साल माघ बाट औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको साइनो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले स्थापनाको २० वर्ष पूरा गरेको छ । यो अन्तरालमा संस्थाले काठमाण्डौमा रहेको अन्य सहकारी संस्थाहरु माझ एउटा अलग्गै पहिचान बनाइसकेको छ । प्रस्तुत छ, उक्त सहकारीका कार्यकारी अधिकृत मेघ लामा तामाङसँगको कुराकानी -
तपाईको सहकारीको बारेमा बताइदिनुहोस न ?
साइनो बहुउद्देश्यीय सहकारी सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र कानून अनुसार वि.स.२०५६ साल देखी सञ्चालनमा आएको छ । यहाँको संस्थापक, संचालक तथा कर्मचारीहरु स्थानिय छन् । यो व्यवसायिक रुपमा सफल स्थानिय यूवाहरुको अगुवाईमा स्थापना भएको संस्था हो । यो संस्था काठमाण्डौमा रहेको सहकारीहरुमध्ये उत्कृष्ट सहकारीको पहिचान बनाउन सफल भएको छ ।
सहकारीको अवस्था कस्तो छ ? व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?
पूर्ण प्रतिस्पर्धा,कर्मचारी व्यवस्थापन,वित्तीय व्यवस्थापन आदि सबैलाई सन्तुलनमा ल्याउन गाह्रो छ । तर पनि यसलाई हाम्रा संस्थाको कर्मचारी,सञ्चालक समिति, सस्थाका सदस्यहरु सँगको समन्वय राम्रो भएकोले व्यवस्थापन मजबुत छ । साइनो सहकारी औसत रुपमा अन्य सहकारी भन्दा राम्रो र व्यवसायिक छ । संस्थापक र संचालकहरुको राम्रो लगानी रहेको छ । हाम्रो संस्थाले पूर्ण रुपमा बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दछ । त्यसकारण सहकारीलाई वित्तीय कारोबार गर्न सहज छ । हामीले वित्तीय विकासका साथै सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणको दायित्व पनि निर्वाह गरेको छौँ । हामीसँग भएको रकमको निश्चित प्रतिशत संस्थामा तरलता राखि बांकी रकम आफ्ना सदस्यहरुलाई नै ऋण उपलब्ध गराउँदछौ ।
संस्थापक र संचालकहरुको लगानी नाम मात्रको हुन्छ भन्छन नि ?
हाम्रो संस्था सहकारी भावना र सिद्धान्त अनुसार चलेको छ । हाम्रोमा त्यस्तो छैन । संस्थाका संस्थापक र संचालकहरु समाजमा राम्रो छवि भएकाहरु छन् । यस संस्थामा उहाँहरुको पर्याप्त शेयर पूँजी रहेको छ ।
तपाईको सहकारीको कुन व्यवसायमा लगानी केन्द्रीत छ ?
प्रमुख कुरा हामीले आफना शेयर होल्डरहरु भन्दा बाहिर लगानी गर्दैनौँ । हामी हाम्रो शेयरहोल्डरहरुको डिपोजिट स्वीकार गर्छौ । त्यही अनुसार प्रपोजल हेरेर लगानी गर्छौँ । यसैअनुसार हामीले बजारमा विभिन्न किसिमको व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेका छौँ । विशेष गरि होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा हाम्रो लगानी छ । यातायात साथै जलविद्युतमा लगानी गर्ने योजनाहरु छन् ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण कस्तो छ ?
सहकारीहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खासै लगानी नगरेको कारण लगानीको वातावरण नभएर लगानी नभएको भन्ने धेरैको बुझाई छ । तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण छ । हाम्रो सहकारीले यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ । त्यसका लागि योजनाहरु बनाउँदैछौँ ।
सहकारीका समस्या तथा चुनौतिहरु के के छन् ?
हो सहकारीमा धेरै समस्या तथा चुनौतिहरु छन् । धेरै जसो सहकारीहरु नियम विपरित छन् । सहकारीको नियम भन्दा बाहिर रहेर नीजि कम्पनिको मोडलमा चल्नेहरु धेरै छन् । खुल्ला र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण भन्ने सहकारीको सिद्धान्त विपरित भएकोले समस्याहरु सिर्जनाहरु हुन्छन् । मूख्य कुरो त अहिलेको सहकारी ऐन नै सहकारी अनुकुल छैन । सहकारीको अन्तर्रा्िष्ट्रय सिद्धान्तको विपरित छ । सरकारले तीन खम्बे नीतिमा एउटा सहकारीलाई मान्नु सकारात्मक कुरा हो तर त्यहि अनुसार सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ अलि मिल्दो छैन भन्ने मेरो बुझाई हो । जब कि नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेट भाषण पश्चात मौद्रिक अर्थनीति सार्वजनिक गरेर माइक्रो फाइनान्सको ब्याजदर १८ प्रतिशत र सेवा शुल्क २ प्रतिशत घोषणा गर्यो । तर सहकारीलाई १६ प्रतिशतमा काम गर भनेको छ । ब्याजदर बजारको माग र पूर्तिले निर्धारण गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले गर्ने होइन ।
सहकारीमा एकलौटि प्रवित्ति देखिएको हो ?
हो, सहकारीहरु नीजि कम्पनि तरिकाले आफनै सुरमा चलाइरहेका छन् । जुन सहकारीको नियम विपरित हो । यस्तै कारण पछि सहकारीलाई समस्यामा पर्ने हो ।
यी समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
सहकारीमा सर्वप्रथम राजनीति हुनु भएन । सहकारीहरु नीति नियम अनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ । सरकारले राम्रोसँग बजेट व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्दछ । सरकारले कडाइका साथ सहकारी ऐन नियम लागु गराउनु पर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो काम गर्नेलाई तुरुन्त हटाउनुपर्दछ ।
सहकारीमा पनि राजनीति हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो अहिले सहकारीमा राजनीतिक छाएको छ । सहकारीलाई सफल बनाउन राजनीति हुनुहुँदैन । व्यक्तिगत हित भन्दा संस्थागत हितको भावना राखेर अगाडी बढ्नुपर्दछ ।
प्रस्तुती : प्रजना राई
श्याम रिमाल र प्रकाश शिलवाल २ महिना अगाडी
हाम्रोखबर ५ महिना अगाडी